Yedu Yakavanzika Policy - Nyore Multi Ratidza - Dhijitari Signage Software
Yako Dziviriro Yakachengetedzwa
Zvekuvanzika Policy yeVirtual Cockpit UK LTD
At Easy Multi Display, inowanikwa kubva www.easy-multi-display.com, chimwe chezvinhu zvedu zvakakosha ndiko kuvanzika kwevashanyi vedu. Gwaro reSecurity iyi rine marudzi eruzivo rwunounganidzwa uye runyorwa ne Easy Multi Display uye nemashandisiro atinoita.
Kana iwe uine mimwe mibvunzo kana uchida rumwe ruzivo nezve yedu Yakavanzika Policy, usazeze kutibata nesu kuburikidza neemail ku support@easy-multi-display.com.
Kana iwe uchida kuziva kuti chii chinovanzika mutemo, unogona kureva iyo Chinyorwa cheWikipedia.
Display Rakawanda Rakawanda rinotevedzera maitiro akajairika ekushandisa marefaira Aya mafaera anotema vashanyi pavanoshanyira mawebhusaiti. Ese makambani anotambira anoita izvi uye chikamu chekugamuchira services 'analytics. Ruzivo rwakaunganidzwa nemafaira ehuni rinosanganisira internet protocol (IP) kero, browser mhando, Internet Service Provider (ISP), zuva nenguva chitambi, kutaura / kubuda mapeji, uye pamwe nhamba yekubaya. Izvi hazvibatanidzwe neruzivo chero ruzivo runozivikanwa pachako. Chinangwa cheruzivo ndechekuongorora maitiro, kubata nzvimbo, kutsvaga mafambiro evashandisi pawebhusaiti, uye kuunganidza ruzivo rwevanhu.
Kunge chero chero webhusaiti, Easy Multi Display inoshandisa 'cookies'. Makuki aya anoshandiswa kuchengetedza ruzivo kusanganisira zvido zvevashanyi, uye mapeji ari pawebhusaiti iyo muenzi akawana kana kushanya. Ruzivo rwunoshandiswa kukonzeresa ruzivo rwevashandisi nekugadzirisa yedu yewebhu peji zvemukati maererano neyevashanyi 'browser rudzi uye / kana rumwe ruzivo.
Iwe unogona kubvunza nezve rondedzero iyi kuti uwane iyo Yega yega Yega yega yega yega yekushambadzira vanobata ne Easy Multi Display
Chimwe chikamu chezvatinokoshesa ndechekuwedzera kuchengetedzwa kwevana vachiri kushandisa internet. Isu tinokurudzira vabereki nevachengeti kuti vatarise, vatore chikamu, uye / kana kuongorora uye kutungamira zvavanoita online. Easy Multi Display haifarire kuunganidza chero ruzivo rweMunhu Ruzivo kubva kune vana vari pasi pemakore 13. Kana iwe uchifunga kuti mwana wako akapa urwu rudzi rweruzivo pane yedu webhusaiti, tinokukurudzira iwe kuti utaure nesu nekukurumidza uye tichaita kuedza kwedu kukuru kurumidza kubvisa ruzivo rwakadaro kubva kumarekodhi edu.
Iyi YeSecurity Policy inoshanda chete kune edu epamhepo zviitiko uye inobvumirwa kune vashanyi kune webhusaiti yedu neruzivo ivo vakagovana uye / kana kuunganidza mu Easy Multi Display. Iyi demo haishande kune chero ruzivo rwunounganirwa kunze kwewebhu kana kuburikidza nematanho kunze kweiyi webhusaiti.
Nokushandisa webhusaiti yedu, iwe pano unobvumirana neChinyorwa Chedu Chedu uye unobvumirana neMitemo neMagariro.
Chero mimwe mibvunzo?
Kana iwe uchiri nemibvunzo nezve iyo Easy Multi Ratidza zvakavanzika mutemo, ndapota bata vatengi vedu pa support@easy-multi-display.com. Tichafara kukubatsira!
Kana iwe uchifarira yedu Nyore Multi Ratidza software, tinya pano kurodha yedu yemahara muyedzo vhezheni.
Mutungamiriri: Guy Condamine, gco@virtual-cockpit.com